Ny lokon'ny akanjo amin'ny akanjo
Universal ... matetika ny ankizivavy no mitady zavatra afaka manome azy ireo. Raha miresaka momba ny akanjo isika, dia ny lokon'ny menamena maitso ary dia manerantany, satria mandeha amin'ny firaisana ara-drariny. Mazava ho azy, mila misafidy ny aloky ny tsara ianao. Ireto misy fitsipika tsotra: ny maoderina ny loko hoditra sy ny volony, ny manaitra kokoa ny loko mamy. Manaova zavatra ho an'ny tenanao ary mijery ny fitaratra. Vao mainka navoaka ny endriny, ary nahazo alokaloka tsara ny hoditra? Noho izany, ny aloky ny lokony mena amin'ny akanjo dia mendrika ny manome ny safidy.
Loko mifangaro tsara
Inona no loko tena mifangaro amin'ny mena? Ny Stylists dia mifantoka amin'ny mainty, beige, fotsy, coral, peach. Hisy lokangon-tsangantsanganana mahaliana ao anaty akanjo marefo raha toa ka averinao manga manga, mavo na mavokely ny sary. Aza miakatra ny lohanao mba hametraka vilia sy hanangona accessories amin'ny feony. Mety ho menatra sy tsy misy tsirony ianao. Ny ankizivavy te-hampitombo kokoa ny fitiavam-pitiavana sy ny endriky ny sary dia manosika ny saina hifantoka amin'ny fisian'ny akora sy fotsy. Noho izany, ny akanjo fohy fohy miaraka amin'ny fotsy fotsy dia mijery tsara! Tsy dia mampihetsi-po loatra ny mifangaro ny mena amin'ny loko miloko fotsy sy ivory. Ny tsy fisian'ny fifanoherana mafy dia mahatonga ny sary ho malefaka, mahafinaritra, mahafinaritra. Raha ny fampifandimbiasana ny fotsy dia mety tsara kokoa ho an'ny fanandramana am-pitiavana, ny fifangaroan'ny mena sy ny mainty dia ahafahana mampiditra ny antontan'isa sy ny fandeferana.
Amin'ny inona no tokony hitafy akanjo mipetaka?
Ny fiantsoana loko marevaka miaraka amin'ny siny dia afaka mameno maso ny sary. Raha te-hamirapiratra ianao dia misafidy ny akora misy ranom-boankazo, mavo, maitso na menaka, ka manadino ny fananany amin'ny hafanana na ny hatsiaka.
Karazana karazana satroboninahitra tokony hatao amin'ny akanjo hoditra ve?
Boho fitafiana - 32 sary amin'ny sary boho malaza amin'ny fotoana rehetra
Akanjo fohy mahafinaritra - sary 58 nalaina sary tamin'ny akanjo fohy
Photosession amin'ny natiora - manondro
Banana masira ho an'ny tarehy - fomba tsara indrindra ho an'ny karazana hoditra rehetra
Takelaka vita amin'ny hoditra
Shrimp amin'ny soja soja
Sarafana amin'ny fahavaratra 2015
Tansy - toetra mahasoa sy fanoherana
Fihetseham-po tao amin'ny fianakaviana kintan'i George Clooney
Ny asa tanana avy amin'ny taratasy - hazo krismasy
Malamute sy Husky - fahasamihafana
Jereo ny Diego Portales
Kaviar avy amin'ny alikaola vita amin'ny baka amin'ny ririnina
Bihorial kambana kambana - inona io?
Ny hena tena ilaina